Akụkọ - Sistemụ Nkwado Ala Ndozi
Sistemụ nkwado ala mmezi na -enye ndị ọrụ ụgbọ elu na ndị ọrụ nkwado mmezi ụzọ iji bulite ma budata data nlekọta ụgbọ elu niile maka nyocha gbasara ahụike na ojiji. Usoro a na-akwadokwa mgbanwe data na sistemụ njikwa ụgbọ mmiri ma nwee ike ịnye ụgbọ elu Gripen mmelite ngwanrọ.
Nyocha nke data mmezi
Sistemụ Nkwado Ala Mmezi na -enyere njikwa ọrụ nlekọta ụgbọ elu aka n'okpuru ọnọdụ ọrụ na ọnọdụ dị iche iche.
Ọ na -enye ndị ọrụ ụgbọ elu ala na ndị ọrụ nkwado mmezi ụzọ iji weghachite ndekọ ndekọ mmezi site na otu ma ọ bụ ọtụtụ ụdị, mepụta Sistemụ nleba anya ahụike na ojiji (HUMS) maka nyocha na nyocha akpaka. Sistemụ a na -enyekwa ngwaọrụ maka ikewapụ ọdịda nke akwụkwọ ntuziaka maka ihe omume ọdịda, na -enyekwa atụmatụ na eserese iji kwado ndị ọrụ n'ịrụ ụgbọ elu ahụ.
Na -akwado mmelite ngwanrọ ụgbọ elu
Ụgbọ elu ndị agha Gripen nwere ike ịnweta mmelite ngwanrọ oge niile n'agbanyeghị ọnọdụ ha, iji mezuo ihe ndị chọrọ ugbu a. Sistemụ Nkwado Ala Mmezi, yana oghere dị n'etiti ụgbọ elu ahụ na Sistemụ Ịmepụta Maapụ Dijitalụ iji bulite data buru ibu.
Njikọ na sistemụ njikwa ụgbọ mmiri
Sistemụ Nkwado Ala Mmezi na -akwado ịnyefe data na sistemụ njikwa ụgbọ mmiri dị iche iche maka nkwado na nhazi ihe. Site na ịgbanwere data arụmọrụ teknụzụ maka njikwa njikwa ụgbọ elu yana data ike ọgwụgwụ maka ahịrị dochie anya ụgbọ elu wdg, a na -enweta ihe dị ọnụ ahịa na njikwa mmezi.
Sistemụ nkwado ala mmezi MGSS
N'ikwekọ na ezigbo ụgbọ elu, Saab na -ebute usoro nkwado arụmọrụ n'ihu yana usoro mgbasa ozi emebere iji gosipụta sistemụ ngwa agha bụ nhazi ugbu a. Saab ewepụtala usoro mmepe ebe a na -ejide ihe niile achọrọ maka ngwa ọgụ niile n'oge, si otú a na -emetụta nhazi ya site na mmalite.
Nhazi ahụ na -abịaru nso, nke a na -ahụkarị maka ngwa na ngwanrọ niile eji arụpụta ezigbo ụgbọ elu, na -ahụ na mgbanwe ọ bụla nke ụgbọ elu ahụ na -egosipụta na -akpaghị aka na sistemụ nkwado na ọzụzụ.